"Tsiprolet" - kuyinto-antibiotic noma cha? Impendulo yalo mbuzo, uzofunda kusukela izinto ezihambisana lesi sihloko. Siphinde akutshele mayelana kuzinjongo izidakamizwa wathi isetshenziswa, uma unanoma yimiphi imiphumela emibi kanye contraindications, kunalokho ungayithola enye, nokunye.
Ukwakheka kanye ukuma
"Tsiprolet" - iqembu kwamaphilisi, okuhlanganisa into enjalo esebenzayo kuyinto ciprofloxacin. Ngaphezu kwalokho, nomuthi kuhlanganisa nemiyo lowengetiwe ngendlela yamanzi nemijovo, hydrochloric acid, disodium edetate, i-sodium chloride futhi benzalkonium chloride isixazululo.
ungakwazi ukuthenga izidakamizwa "Tsiprolet" ngayiphi indlela? Imithi elwa namagciwane akhiqizwa ezihlukahlukene. Ngokuphathelene wathi nomuthi, ikhona njengoba isixazululo ukumnika, iso amaconsi futhi amaphilisi.
"Tsiprolet" - kuyinto-antibiotic noma cha? Yiqiniso, yebo. deystvuyuschimveschestvom wayo lomkhulu ciprofloxacin. Le ngxenye is a esuselwe fluoroquinolone.
Umgomo we operation kubhekwa izidakamizwa ezivimbela DNA gyrase amaseli virus. Lo mphumela kuholela ukuphazamiseka nomuthi we-DNA zamagama, kanye ingasheshi ukukhula microbial nokukhula.
Yini okumele uyilindele emva kokwelashwa "Tsiprolet" izidakamizwa? Imithi elwa namagciwane imbangela imakwe izinguquko morphological okuholela amaseli microbial ayafa. umphumela amagciwane of kokuthatha lesi izidakamizwa akuyona kuphela ngesikhathi division, kodwa futhi phakathi nawo nezilwanyana ezincane igremu-HIV.
Ngokuqondene flora igremu-HIV, ngakho-ke umphumela amagciwane livela phakathi cell division kuphela.
Ingabe umuntu zibulale izidakamizwa "Tsiprolet"? Imithi elwa namagciwane zihlale yingozi kwesibindi kanye nezinye izinhlaka ipheshana wokugaya ukudla. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi amaseli silwanyana zingenalo DNA gyrase. Leli qiniso aqede kungenzeka imiphumela anobuthi kwezidakamizwa emzimbeni.
Asinakusho ukuthi lokhu izidakamizwa akakubangeli ukumelana namanye amanxusa elwa namagciwane. "Tsiprolet" kuyinto matasa mayelana nezimila aerobic, enterobacteria, flora igremu-negative, chlamydia, Lister, isifo sofuba Mycobacterium, Yersinia, Campylobacter, amaprotheni namanye mycoplasmas. Kulokhu wathi nomuthi ayinalo umphumela bacteriostatic futhi amagciwane ku treponemu pallidum (okuyi-ejenti causative of ugcunsula).
ngabe izidakamizwa amuncwa umzimba, "Tsiprolet"? Imithi elwa namagciwane yaleli qembu ngokushesha ngempela ugxile kusukela pheshana emathunjini. Lokhu nomuthi ukungena nezicubu ithambo, ngamathe, uhlelo kwemisipha, isikhumba, i-lymph, Bile, izinso, lung, idlala, isibindi, pleura, peritoneum, esibelethweni kanye isidoda.
Kuboniswa nomuthi ngokusebenzisa izinso (mayelana 50-70%). Futhi, izidakamizwa uyaphuma kanye indle (20%).
Kungani sidinga umuthi "Tsiprolet"? Imithi elwa namagciwane (ukubuyekezwa kwe-nomuthi uyoboniswa ngezansi) ezinqunyiwe izifo eziningi.
Kubhekwe umuthi ikakhulukazi sibonisa ngempumelelo ngokwayo kulezi zimo ezilandelayo:
yezifo engenhla ipheshana zokuphefumula (isib namathansela, abezindaba otitis, pharyngitis, mastoiditis, sinusitis, sinusitis);
ukubhujiswa webhaktheriya umgudu wokuphefumula (isib cystic fibrosis, bronchiectasis, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, inyumoniya, umphimbo obuhlungu);
izifo kohlelo genitourinary (isib salpingitis, cystitis, pyelonephritis, oophoritis, ithumba ijabulise, adnexitis, prostatitis, isipatsholo, i-chlamydia, chancroid, pelivioperitonite, pyelitis);
Izilonda (isib cellulitis, abscesses, ukusha, izilonda utheleleke, izilonda);
isimiso sokugaya ukudla bungene iziyaluyalu (isib peritonitis, i-typhoid fever, salmonellosis, abscesses intraperitoneal, yersiniosis, campylobacteriosis, ikholera, shigellosis);
izifo amathambo namalunga (isib sepsis, samathambo ukonakala, osteomyelitis).
Manje wazi inhloso izidakamizwa "Tsiprolet" ingasetshenziswa. Ngo angina kuyasiza kahle. Nokho, ngokuvamile, umuthi onjalo ezinqunyiwe nokuvimbela izilonda ezithathelwanayo ngemva kokuhlinzwa.
I nomuthi ngesimo wamehlo asetshenziswe conjunctivitis, blepharitis nebhali.
Kungakhathaliseki ukuthi singamaKristu ngokucabangela Izimo has-antibiotic? Njenganoma iyiphi izidakamizwa, ku izidakamizwa "Tsiprolet" njengoba kukhona ezinye imikhawulo ukusetshenziswa. It is hhayi isetshenziswe ezigulini ezingane (okungukuthi, ngaphambi yobudala). Lokhu kungenxa yokuthi ngalesi sikhathi ingane ubumbe uhlelo lwamathambo kanye skeleton bebonke.
Futhi, i-ejenti antibiotic sinqatshiwe ukuthatha abesifazane nge sokukhulelwa, ukungabekezelelani ukuba ciprofloxacin futhi ngesikhathi ibele.
Lapho cerebrovascular, zengqondo, iziyaluyalu cerebral kwegazi, isifo sokuwa, nabanesithuthwane syndrome, ezinzima isifo sezinso futhi isibindi, kanye nabantu abadala lo muthi ebekiwe kuphela emva kokubonisana onguchwepheshe.
Indlela ukuthatha lesi sidakamizwa "Tsiprolet"? Imithi elwa namagciwane (i Analogue zomuthi esingathandanga ukudalulwa igama kamuva) asetshenziswa kuphela kadokotela ngemva ngihlolwa.
Izibhebhe zithathwa ngomlomo kathathu ngosuku 250 mg. Uma isiguli Yiqiniso ezinzima kakhulu lesi sifo, umthamo senyuselwa 0.5 noma 0.75 igremu.
Ukuze izifo we urogenital uhlelo izidakamizwa iqondiswa kabili ngelanga engu- 0.25 noma 0.5 amagremu izinsuku 7-10.
Ngo amaphilisi isipatsholo ayinzima esetshenziswa singly e isamba 0.25 noma 0.5 amagremu.
Lapho igciwane gonococcal (futhi mycoplasmosis ne-chlamydia) nomuthi iqondiswa njalo ngemva kwamahora angu-12 0.75 amagremu (izinsuku 7-10).
Lapho kulungiselelwa chancroid isetshenziswa Kabili ngosuku isamba mg 500.
Tablets "Tsiprolet" igwinywe lonke wageza phansi ketshezi.
Uma uke oqokwe njengelungu nomuthi ngesimo iso amaconsi, kufanele safaka njalo ngemva kwamahora 4 ngoba 1-2 amathonsi. Ngo izilonda ezinzima kokusetshenziswa kwezidakamizwa by 2 sehla njalo ngemva kwemizuzu engu-60.
Njengoba ekululameni kwesiguli ukusetshenziswa-antibiotic Ungakhawulela imvamisa umthamo.
Ngokuqondene 'Tsiprolet "isixazululo, iqondiswa ngemithambo yegazi (0.2 g) for isigamu sehora. ukwelashwa osteomyelitis kungathatha cishe izinyanga ezimbili.
Ngemva ukusetshenziswa emthanjeni zomuthi kuthiwa ukushintsha ifomu tablet.
Ama-antibiotic "Tsiprolet": side effects
Kasibili zonke antibiotic, kuhlanganise "Tsiprolet" babe engemihle. Ngakho-ke, kufanele kuthathwe kuphela kadokotela.
Phakathi imiphumela emibi ngokuvamile kubonakala khona yilezi ezilandelayo:
anda ukujuluka, ukuqwasha, nakwisyncope, isiyezi, thrombosis kwemithambo yobuchopho, ukukhathazeka, migraine, ukukhathala, ukusabela okuhlukahlukene zengqondo, paralgeziya neuropathy, ukudideka, amaphupho amabi, ukucindezeleka eliqhaqhazelayo kwamalungu omzimba, ukuhhema, waqinisa intracranial;
ukuhlanza, jaundice cholestatic, uhudo syndrome, kwehle esesuthi, ukubuyisa, gepatonekroz, ubuhlungu epigastric, ukuvuvukala, isicanucanu, isifo sokusha kwesibindi kohlobo;
ukulahlekelwa kukuzwa, leukocytosis, tinnitus, granulocytopenia, ukunambitheka ukungasebenzi, ukuntuleka kwegazi emzimbeni, diplopia, tachycardia, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, iconsi wegazi;
iguliswa impendulo, arthralgia, amawala, samathambo, tenosynovitis;
polyuria, kahle izinso umsebenzi azotovydeitelnoy, dysuria, nephritis interstitial, glomerulonephritis, hematuria, crystalluria.
Inani kanye analogue
Ziningi "tsiprolet" esiyingqayizivele. Ngu ukwakhiwa efanayo kungafaka imithi ezilandelayo: "Aloxe", "Medotsiprin", "Floximed", "Ifitsipro", "Tsiloksan", "Tsipronat", "Tsiproksol", "TSifran", "Tsipromed" "Ciprofloxacin", " Tsiprofarm "," Tsiprol "nabanye.
Njengoba ngentengo ke kubhekwa izidakamizwa akusilo eliphezulu kakhulu. amaphilisi mg 500 angathengwa ruble 110 (10 nama-PC.). Izindleko ngeso amaconsi futhi isixazululo komjovo ububanzi ruble 60-150.
Uphenyo isikhungo sokwelapha
Iningi nokubuyekezwa "Tsiprolet" antibiotic akhayo. Lesi sidakamizwa kuyasiza aphathe ezihlukahlukene nezifo. Nokho, qaphela ukuthi lingase lithathwe kuphela ezimweni ezimbi kakhulu.
Iziguli eziningi ushiye lo nomuthi futhi impendulo engeyinhle. Ngokuvamile, zihlotshaniswa okuvela amathuba okuba nemiphumela engemihle njengokuba nesiyezi, ubuthakathaka kanye kobukhulu bokucindezeleka zokuphefumula.
The best Isifaniso "sonapaks"
Ezingu-9 Ukudla Margarity Korolevoy, kanye ezimbili kusukela okunomsoco abadumile
Passive samanje esithi: Izibonelo